Aiza ny atiny? | Martech Zone
Aiza ny atiny?
Alatsinainy Oktobra 2, 2006 Alahady, Septambra 30, 2012 Douglas Karr
Anio hariva aho dia nanindry ny rohy lahatsoratra iray ary naratra tamin'ity tranonkala ity. Misy vaovao ve ato amin'ity pejy ity any ho any? (Misy… nasongadiko mena io). Mampihomehy tanteraka izany! Iza no te hamaky ity pejy ity? Misy dokambarotra, tselatra, mihetsika fiara, divs mitsingevana… mampihomehy tanteraka. Tsy mahagaga raha maninona aho no tsy mandeha amin'ireo tranonkala ireo. Tsy hitako izay atiny vakina!
Izany dia fanaratsiana ny mpanao gazety izay mazava ho azy fa nandany fotoana tamin'ny lahatsoratra iray (izay tsy novakiako). Tsy mieritreritra fampitoviana akory aho… angamba mijery fandaharana amin'ny fahitalavitra 3 minitra miaraka amin'ny doka 27 minitra.
Tanjona, azafady mbahidio ny akanjon'ny akoho
Ajax, DOM, RSS, XHTML, SOAP… izany rehetra izany! Mora noho ny nieritreretanao azy!
3 Okt 2006 amin'ny 12:04 PM
Manaiky tanteraka aho Doug. Mampanontany tena ahy izany rehefa mahita tranokala toy izany aho raha manoratra vola ho an'ny mpamaky na mpamaky. Izaho manokana amin'ny tranokala toy izany dia ataoko iraka TSY ny hanao tsindrio dokambarotra.
Amin'ny maha mpitoraka bilaogy antsika dia sahirana amin'ny zavatra “fancy” ampidirina ao amin'ny bilaoginay izahay. Nanomboka fisehoan-javatra vaovao tao amin'ny bilaogiko aho izay amin'ny faran'ny herinandro dia mandefa famintinana ireo tranonkala izay nanonona The Imus Show aho. Ny vadiko sy i Liz amin'ny maha-bilaogy mahomby azy ireo dia mihevitra fa mahasosotra izany ary tokony hokarohina kely. Fa halako ny mamono ny olona izay mitady vaovao fotsiny fa tsy ny sary mahafinaritra. Tsy manampy ny tsy fananako taolana mamorona ao amin'ny vatako raha ny zavakanto no resahina.
Tohizo ny lahatsoratra. Tiako ny bilaoginao.
3 Okt 2006 amin'ny 2:48 PM
Misaotra, Roy! Tena tiako ny fanohanana. Midika zavatra betsaka!